Oge nke ụbọchị maka Jenụwarị 23: akụkọ banyere Santa Marianne Cope | Ahụrụ m Jizọs n'anya
(23 Jenụwarị 1838 - 9 Ọgọst 1918)
Ọ bụ ezie na ekpenta na-atụ ọtụtụ ndị ụjọ na narị afọ nke 1898 Hawaii, ọrịa ahụ butere nnukwu mmesapụ aka nke nwanyị a bịara mara dị ka mama Mariana nke Molokai. Obi ike ya nyere aka nke ukwuu iji melite ndụ ndị o metụtara na Hawaii, ókèala jikọtara United States n'oge ndụ ya (XNUMX).
Mmesapụ aka na obi ike nke nne Marianne mere emume maka mmeri a tiri ya na May 14, 2005 na Rome. Ọ bụ nwanyị kwuru "asụsụ nke eziokwu na ịhụnanya" maka ụwa, Kadịnal José Saraiva Martins kwuru, onye isi ọgbakọ Congregation for the Causes of Saints kwuru. Kadịnal Martins, onye chịburu uka a na-eti iti ihe na St. Peter's Basilica, kpọrọ ndụ ya "ọmarịcha ọrụ amara Chukwu". N'ikwu banyere ịhụnanya pụrụ iche o nwere maka ndị na-arịa ekpenta, ọ sịrị: "Ọ hụrụ n'ime ha ihu ahụhụ Jizọs. Dị ka Ezigbo Onye Sameria ahụ, ọ ghọrọ nne ha".
Na Jenụwarị 23, 1838, a mụrụ nwa nwanyị nye Peter na Barbara Cope nke Hessen-Darmstadt, Germany. Aha nwa agbọghọ ahụ bụ aha nne ya. Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị ezinụlọ Cope kwagara United States wee biri na Utica, New York. Nwa agbọghọ Barbara rụrụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ ruo August 1862, mgbe ọ gara Nwanna nwanyị nke Orderkpụrụ nke Atọ nke St. Francis na Syracuse, New York. Mgbe ọrụ gachara na Nọvemba nke afọ na-eso ya, ọ malitere izi ihe n'ụlọ akwụkwọ parish nke Assumption.
Marianne ejidewo ọkwá dị elu n'ọtụtụ ebe ma bụrụ onye nkụzi a ma ama n'ọgbakọ ya ugboro abụọ. Onye ndu ndu, ọ bụ onye isi ụlọ ọgwụ St. Joseph na Syracuse ugboro atọ, ebe ọ mụtara ọtụtụ ihe ga-abara ya uru n'oge afọ ya na Hawaii.
N’afọ 1877, a hoputara ya, Mammane jiri otu olu were họpụta ya n’afọ 1881. Afọ abụọ ka nke a gasịrị gọọmentị Hawaii na-achọ onye ga-elekọta ebe a na-anabata ndị mmadụ na Kakaako maka ndị a na-enyo enyo na ekpenta. E nyochara ihe karịrị òtù okpukpe 50 dị na United States na Canada. Mgbe a rịọrọ ndị nọn Syracusan ahụ, 35 n'ime ha wepụtara onwe ha ozugbo. Na October 22, 1883, Mama Marianne na ụmụnne nwanyị isii ndị ọzọ hapụrụ Hawaii ebe ha na-elekọta ụlọ nnabata Kakaako na mpụga Honolulu; n'agwaetiti Maui, ha emeghewokwa ụlọ ọgwụ na ụlọ akwụkwọ maka ụmụ agbọghọ.
Na 1888, Mama Marianne na ụmụnne nwanyị abụọ gara Molokai imeghe ụlọ maka "ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị na-enweghị nchekwa" ebe ahụ. Ndi ochichi Hawaii choro izipu umuaka n’olu a siri ike; ha ekwesịghị ichegbu onwe ha gbasara mama Marianne! Na Molokai ọ na-elekọta ụlọ nke San Damiano de Veuster guzobere maka ụmụ nwoke na ụmụ nwoke. Mama Marianne gbanwere ndụ na Molokai site na ịmebata ịdị ọcha, mpako na ihe ọchị nye ógbè ahụ. Uwe na-egbuke egbuke na uwe mara mma maka ụmụ nwanyị bụ akụkụ nke ụzọ ya.
N'ịbụ onye ndị gọọmentị Hawaii nyere ya na Royal Order nke Kapiolani ma mee ememe na uri nke Robert Louis Stevenson dere, Mama Marianne ji ikwesị ntụkwasị obi gaa n'ihu n'ọrụ ya. Hermụnne ya nwanyị adọtala ọrụ n'etiti ndị Hawaii ma ka na-arụ ọrụ na Molokai.
Mama Marianne nwụrụ n’abalị itolu nke ọnwa asatọ n’afọ 9, gbuo ya n’afọ 1918 ma mee ya afọ asaa ka nke ahụ gasịrị.
Ndị gọọmentị achọghị ịhapụ mama Marianne nne na Molokai. Afọ iri atọ nke nraranye gosipụtara na ụjọ ha enweghị isi. Chineke na-enye onyinye n’adabereghị na nke myopia mmadụ ma na-ekwe ka onyinye ndị ahụ too nke ọma maka alaeze ya.